AppSheet: Vaka Uye Dzorera Iyo Yemukati Inotenderwa Nhare Yekushandisa NeGoogle Mapepa | Martech Zone
AppSheet: Vaka Uye Dzorera Iyo Yemukati Kubvumidzwa Nhare Yekushandisa NeGoogle Mapepa
Chipiri, Kurume 16, 2021 Chipiri, Kurume 16, 2021 Douglas Karr
Ndichiri kukura nguva nenguva, ini ndinoshaya zvese tarenda kana nguva yekuve izere-wenguva yekuvandudza. Ndinoonga ruzivo rwandiinarwo - zvinondibatsira kubvisa musiyano uripo pakati pezviwanikwa zvekuvandudza nemabhizinesi ane dambudziko mazuva ese. Asi… ini handisi kutsvaga kuramba ndichidzidza.
Pane zvikonzero zvinoverengeka nei kufambisira mberi hunyanzvi hwepurogiramu isiri zano rakakura:
Panguva ino muhupenyu hwangu - hunyanzvi hwangu hunodiwa kumwe kunhu.
Chikonzero chakakura, zvakadaro, ndechekuti ini handitende kuti kudiwa kwekusagutsa kudiwa kwevagadziri kunogara.
Sei? Nekuti mapuratifomu makuru ari kuendesa zvisingaite zvakanaka mhinduro dzemakodhi
Kwete Kodhi, isina Kodhi, uye Yakadzika Code Mhinduro
Chikamu chinotevera chetekinoroji yedhijitari inogona kuve inonakidza kupfuura chero kufambira mberi kwatakaona munguva yakati rebei. Makambani makuru ari kuvandudza kudhonza uye kudonhedza (hapana kodhi kana isina kodhi) mhinduro dzakapenga mushe. Mukana weaya masisitimu hauna muganho sezvo vatungamiriri vebhizimusi vasingazombodi femu yekusimudzira kuti vaunze mhinduro yavo kubva pamasiketi sketch kusvika kuchishandiswa chizere.
Kana uri kushandisa Google workspace yesangano rako (ini ndairikurudzira kwazvo), ivo vatangisa AppSheet - isina-kodhi yekushandisa yekuvaka! With AppSheet, iwe unogona kukurumidza kugadzira tsika mapurogiramu kubatsira kubatsira kugadzirisa, kugadzirisa, uye kurerutsa basa. Hapana kukodha kunodiwa.
Chero ani ari muGoogle Workspace yako anogona kugadzira nekugadzirisa avo maapp ... izvo zvinogona kuwedzera kugadzirwa kwechikwata chako, kudzikisira kukanganisa, uye kudzora kusaririra kwechikwata chako chebudiriro.
AppSheet Yemukati Kubvumidzwa Kunyorera
Heino muenzaniso wakanaka, a manejimendi kubvumidza kunyorera iyo inosanganisira Google Mapepa uye AppSheet kupuruzira zvirinyore kuburikidza nhanho-nhanho mvumo yekubvumidza.
Iyi chaiyo app yakangobatana neGoogle Mapepa, asi iwe unogona kusanganisa chero dhata sosi iwe yaungade.
Shandisa pane iTunes kana Google Play
Chikamu chakanakisa? Iyo app yawakangopedza nguva uchigadzira isina tambo yekodhi haisi chete webhu kunyorera iyo inomhanya mubrowser, AppSheet inobvumira vashandisi kugadzira whitelabel vhezheni yeapp iyo iwe yaunogona kuendesa paGoogle Play kana pa iPhone kuburikidza iTunes.
Kutumirwa kunoda hushoma AppSheet marezinesi ayo anoenderana nemubhadharo-wega-mushandisi kana chirongwa chePRO.
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yangu Google yakabatana kodhi pano.
Tags: apuro ioswebhusaitiisina kodhizvemukati mvumo appapp yeGooglegoogle appsheetgoogle bhizinesigoogle mutambogoogle kubasagsuiteiosios AnwendungItunesMobile Anwendungkwete-kodhihapana-kodhi app anovaka